Samsung Galaxy S6 Edge Plus ကို Android 7.0 တရားဝင်အဖြစ် Odin မှတဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်နည်း Androidsis
Francisco Ruiz | | Samsung, လဲ tutorial, Android ဗားရှင်း
ငါတို့နှင့်အတူပြန်လာ Android မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နှင့် update များကိုလက်တွေ့ကျတဲ့သင်ခန်းစာ, ဒီအချိန်သူတို့ကိုဆုံးမ.ဝါဒပေး Samsung Galaxy S6 Edge Plus ကို Odin မှတဆင့်တရားဝင် Android 7.0 သို့အဆင့်မြှင့်တင် Windows တပ်ဆင်ထားသောကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာမှ
သတ်မှတ်ထားသည့်အစတွင်သင့်ကိုထားခဲ့သည့်ဗီဒီယိုတွင် အဆင့်ဆင့်နှင့်လက်တွေ့ကျကျနှင့်မည်သည့်အနှောင့်အယှက်မှမရှိဘဲသင်လိုက်နာရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုငါပြသည်, ငါတို့နှင့်အတူ Samsung Galaxy S6 Edge Plus အား, အထူးသဖြင့်မွမ်းမံနိုင်ပါလိမ့်မည်အတူ မော်ဒယ် SM-G928F သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်ဒီနောက်ဆုံးပေါ်တရားဝင် Android version ကိုဒီ terminal အတွက်ယခုလက်ရှိအချိန်မှာအခြားဥရောပနိုင်ငံများရှိဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်နှင့်သြစတြီးယားနိုင်ငံများသို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သော်လည်းဆံပင်ကိုမတွေ့ရသေးပေ။
ဒီမှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သင်ခန်းစာကိုလိုက်နာရန်တစ်ခုတည်းသောလိုအပ်ချက် (သို့) Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက်တရားဝင်နောက်ဆုံးပေါ် Samsung firmware ကိုလက်စွဲ, SM-G928F ပုံသွန်းသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Samsung Galaxy S6 Edge Plus ၏ပုံစံဖြစ်သည်။
ယုတ္တိဗေဒနှင့်သာမန်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အပြင်ဤစာမူခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လည်းလိုအပ်သည် Samsung driver ကို PC မှာမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်ထားပါ, Samsung က 100 x 100 မှာ load လုပ်ပြီး USB debugging ကို enable လုပ်တယ် developer settings ကိုမှ။ တည်ဆောက်မှုအရေအတွက်ကိုတကြိမ်လျှင်ခုနစ်ကြိမ်နှိပ်သောအခါဤရွေးချယ်မှုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ဤတည်ဆောက်မှုနံပါတ်ရွေးချယ်မှုသည် Android ချိန်ညှိချက်များ၊ ကိရိယာများအကြောင်းနှင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲအချက်အလက်အတွင်း၌ရှိသည်။
1 Samsung Galaxy S6 ကိုတရားဝင် Android 7.0 သို့အဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များကိုကူးယူပါ
2 Samsung Galaxy S6 အားတရားဝင် Android 7.0 သို့ကိုယ်တိုင် Knox မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မွမ်းမံ။ မွမ်းမံခြင်း၊
3 Nougat နှင့်အတူ Samsung Galaxy S6 Edge Plus SM-G928F အပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Root
Samsung Galaxy S6 ကိုတရားဝင် Android 7.0 သို့အဆင့်မြှင့်ရန်လိုအပ်သောပရိုဂရမ်များကိုကူးယူပါ
Windows အတွက် Samfirm ကို download လုပ်ပါ
Odin ကို Download လုပ်ပါ
Samsung Galaxy S6 အားတရားဝင် Android 7.0 သို့ကိုယ်တိုင် Knox မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်မွမ်းမံ။ မွမ်းမံခြင်း၊
ငါသည်သင်တို့ကိုဤလိုင်းများအထက်ရုံငါစွန့်ပစ်သောပရိုဂရမ်များ download လုပ်ပြီးနောက်ငါတို့ပြုလိမ့်မည်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် Samfirm ဗားရှင်း 0.3.4 ကို run မောက်စ်၏ညာဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စနစ်စီမံခန့်ခွဲသူအနေဖြင့်ရှိခြင်း။ (အပေါ်ကပုံကိုကြည့်ပါ)
ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီလိုင်းတွေရဲ့အပေါ်ကပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပြပေးလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ Model field ထဲမှာငါတို့ Android terminal ရဲ့ model ကိုထည့်ထားလိမ့်မယ်။ SM-G928Fဒေသတွင်းအစိတ်အပိုင်းအတွက်ကျနော်တို့ထားမည် XEF ပြီးတော့ကျွန်တော် screenshot မှာညွှန်ပြခဲ့တဲ့ option တွေ၊ အချို့ထဲကရွေးစရာများကိုအမှတ်အသားပြုလိမ့်မယ် အော်တို, အလိုအလျောက်စာဝှက်ဖြည် y ဒွိသဘာဝ ပြီးနောက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ Update ကို Check.
စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲငါတို့ရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုအထက်ဖော်ပြပါမျက်နှာပြင်တွင်သင်တို့အားငါစွန့်ခွာစေသောသတင်းအချက်အလက်ကိုပြလိမ့်မည် Samsung Galaxy S7.0 Edge Plus အတွက်နောက်ဆုံးပေါ် Samsung ၏ Android6firmware ကို download လုပ်ပါ။ တရားဝင်ဒေါင်းလုပ်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်ဒေါင်းလုပ်ကိုနှိပ်ပြီး၎င်းကိုအပြည့်အဝလည်ပတ်နိုင်စေရန် Odin မှတဆင့်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ဒေါင်းလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။
တရား ၀ င် Android 7.0 firmware ဖိုင်ကို Samsung Galaxy S6 Edge Plus အတွက်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့မှာacompress လုပ်ထားသောဖိုင်ကို ZIP ပုံစံဖြင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုကျွန်ုပ်၏ Windows လမ်းညွှန်တွင် download လုပ်ရပါလိမ့်မည်. (အပေါ်ကပုံကိုကြည့်ပါ)
အခုငါတို့ရလိမ့်မယ် Odin မှာသုံးမယ့် .tar ဖိုင်လေးခုပါတဲ့ဖိုင်တွဲ၊ ငါ CSC ဖိုင်၏ decompression မှပျောက်နေသော PIT ဖိုင်ကိုငါဤလိုင်းများအထက်တွင်ကျန်ခဲ့သောဤဖန်သားပြင်ဖန်သားပြင်၌သင်တို့ကိုပြသသကဲ့သို့ထုတ်ယူသွားပေမယ့်
ယခုအချိန်ရောက်လာပြီ စီမံခန့်ခွဲသူ၊ တောက်ပနေတဲ့ပရိုဂရမ်ဖြစ်တဲ့ Odin ကိုအတူတူအလုပ်လုပ်ပါ:
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည်ခလုတ်များကိုနှိပ်ပါ BL နှင့်အတူစတင်ကြောင်း firmware ကိုဖိုင်ထားရန် BL, AP နှင့်အတူစတင်ကြောင်း firmware ကိုဖိုင်ထားရန် AP နှင့်အတူတူပင် CP y CSC:
ယခုရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ Options ကို Odin ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့စာသားထဲမှာငါပြထားတဲ့အတိုင်းငါတို့မှတ်သားထားတဲ့အရာအားလုံးကိုချန်ထားမှာဖြစ်တယ် -
ဤရွေးချယ်မှုသုံးခုကိုစစ်ဆေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ Auto Reboot, Re-Partition နှင့် F. Reset Time။ ထို့နောက်ရွေးစရာကိုနှိပ်ပါ တွင်း ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလစ်နှိပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ ၀ င်းဒိုးမှာအတည်ပြုပါတယ် လက်ခံခြင်း ကျနော်တို့ CSC မှ unzipped လုပ်ထားသော PIT ဖိုင်ကိုပြီးခဲ့သည့်အဆင့်များထဲမှတစ်ခုအတွက်။
အရာအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ကိုအထက်ပါပုံတွင်ထားခဲ့သကဲ့သို့သင်စစ်ဆေးပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ Samsung Galaxy S6 Edge Plus ကိုလုံးဝပိတ်ပြီး Download mode တွင်ပြန်ဖွင့်ပါ တစ်ချိန်တည်းမှာ keybin Volume + Home နှင့် Power တို့ကို အသုံးပြု၍ သတိပေးမျက်နှာပြင်ပေါ်လာလျှင် volume up ခလုတ်ဖြင့် Download mode သို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုသည်။
Samsung Galaxy S6 Edge Plus ကို Odin သုံးနေသောကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်သည်။ Odin က Samsung ကိုသိဖို့စောင့်နေတယ် တစ်ချိန်ကငါတို့ဆိပ်ကမ်းကို mark COM Odin ရဲ့ဘယ်ဘက်ထောင့်ကခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ START Samsung Galaxy S7.0 Edge Plus အတွက်တရား ၀ င် Android6firmware ကိုစတင် Flash စတင်မည်။
ခန့်မှန်းခြေငါးမိနစ်အတွင်း firmware အသစ်ပျက်စီးခြင်းသည်ကြာရှည်သည်ဟုမဆိုနိုင်ပါ terminal ကိုအဆက်ဖြတ်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သင့်ကွန်ပျူတာသည် sleep hibernation သို့အစရှိသည့်အရာများမပါ ၀ င်ပါကသင် terminal တစ်ခုအနေဖြင့်မရှိပါ။.
Odin ပရိုဂရမ်တွင်၊ COM ဝေါဟာရအထက်ဘယ်ဘက်ထောင့်တွင်ရှိသည့်အခါ terminal မှဆက်သွယ်မှုကိုဆက်နှိပ်ပါ။ PASS.
Odin မှတဆင့်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်သို့မဟုတ်အသစ်ပြောင်းရန်အသစ် \_ t ဗွီဒီယိုသင်ခန်းစာကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အစမှာကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ဖြတ်တောက်မှုတွေမရှိဘဲကြည့်ဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်.
နောက်ဆုံးမှာသင်ဒီမှာငါရှင်းပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသင်လုပ်သမျှအရာအားလုံးကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်သင်ဘယ်လိုထွက်လာတယ်ဆိုတာသင်တွေ့လိမ့်မယ် Samsung ၏တရားဝင် Android Nougat သို့အဆင့်မြှင့်တင်နေသည့်သင်၏ Sasung Galaxy S6 Edge Plus ပေါ်ရှိဤအပြာရောင်မျက်နှာပြင်သည်.
နောက်ဆုံး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Wi-Fi သော့များ၊ အီးမေးလ်နှင့်အခြားကန ဦး ဖွဲ့စည်းမှုများကိုပထမဆုံးပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်မိတ်ဆက်ပြီးနောက် အသစ် Android Nougat 7.0 အိမ်မျက်နှာပြင်.
Nougat နှင့်အတူ Samsung Galaxy S6 Edge Plus SM-G928F အပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့် Root
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Samsung Galaxy S6 Edge Plus ကိုတရားဝင် Android 7.0 ကို Odin မှတဆင့်အဆင့်မြှင့်တင်နည်း
Daniel ferrari ဟုသူကပြောသည်
Daniel Ferrari ကိုပြန်သွားပါ
သူက G928G မော်ဒယ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ဘူးလားမေးတယ်
ဒံယလေသ Emanuel Longhi ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်း၊ dkr or drk ၏ပြorနာကိုကျွန်ုပ်မည်သို့မဖြေရှင်းနိုင်ပါသနည်း၊ nougat သို့ update လုပ်သောအခါဘာပေးသည် (ကျွန်ုပ် Marshallow နည်းလမ်းဖြင့်ကြိုးစားသော်လည်းအလုပ်မလုပ်ပါ။ ) မကြာခင်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဒံယေလ Emanuel Longhi အားပြန်ကြားပါ
ဟဲလို၊ ဖရန်စစ်၊ ဒါကိုလုပ်ဖို့အကြံပေးပါသလား။ ကျွန်တော့်မှာဒီအတွေ့အကြုံတွေသိပ်မရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် Custom ROM ကို install လုပ်တာထက်စာရင်ပိုလုပ်ချင်ပါတယ်။ သင်၏အာရုံအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပြီးပြီ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ဒီကိရိယာဟာအသစ်ဖြစ်ပေမယ့် software ပြproblemနာရှိရမယ်။ ဘက်ထရီက ၁၀ နာရီအထက် ၁၀၀% နဲ့ကြာရှည်မခံတာမို့ဘယ်အသုံးအများမှမရှိဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ပုံမှန်စားသုံးခြင်းမဟုတ်ဘဲသုံးစွဲမှုသည် android OS ထက်သာသည်။ 10 သို့အဆင့်မြှင့်တင်မှုနှင့်အတူပြproblemနာကိုဖြေရှင်းပြီးပြီလားစစ်ဆေးမည်။ ယခုအချိန်တွင်လုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးသည်အဆင်ပြေပါသည်။
Luis Navarrete ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်0မှအရာအားလုံးဖြင့်စတင်မည်လား။
luis navarrete သို့ပြန်သွားရန်